BetaCoin စျေး - အွန်လိုင်း BET ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BetaCoin (BET)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BetaCoin (BET) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BetaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $3 065 892.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BetaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BetaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BetaCoinBET သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0128BetaCoinBET သို့ ယူရိုEUR€0.0108BetaCoinBET သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00979BetaCoinBET သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0116BetaCoinBET သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.114BetaCoinBET သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0805BetaCoinBET သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.282BetaCoinBET သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0476BetaCoinBET သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.017BetaCoinBET သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0179BetaCoinBET သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.282BetaCoinBET သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0993BetaCoinBET သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0694BetaCoinBET သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.959BetaCoinBET သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.16BetaCoinBET သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0176BetaCoinBET သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0196BetaCoinBET သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.399BetaCoinBET သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.089BetaCoinBET သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.37BetaCoinBET သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩15.2BetaCoinBET သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.95BetaCoinBET သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.933BetaCoinBET သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.35
BetaCoinBET သို့ BitcoinBTC0.000001 BetaCoinBET သို့ EthereumETH0.00003 BetaCoinBET သို့ LitecoinLTC0.000236 BetaCoinBET သို့ DigitalCashDASH0.000141 BetaCoinBET သို့ MoneroXMR0.000144 BetaCoinBET သို့ NxtNXT0.999 BetaCoinBET သို့ Ethereum ClassicETC0.00189 BetaCoinBET သို့ DogecoinDOGE3.7 BetaCoinBET သို့ ZCashZEC0.000155 BetaCoinBET သို့ BitsharesBTS0.395 BetaCoinBET သို့ DigiByteDGB0.41 BetaCoinBET သို့ RippleXRP0.0455 BetaCoinBET သို့ BitcoinDarkBTCD0.000441 BetaCoinBET သို့ PeerCoinPPC0.0425 BetaCoinBET သို့ CraigsCoinCRAIG5.84 BetaCoinBET သို့ BitstakeXBS0.546 BetaCoinBET သို့ PayCoinXPY0.224 BetaCoinBET သို့ ProsperCoinPRC1.61 BetaCoinBET သို့ YbCoinYBC0.000007 BetaCoinBET သို့ DarkKushDANK4.11 BetaCoinBET သို့ GiveCoinGIVE27.74 BetaCoinBET သို့ KoboCoinKOBO2.92 BetaCoinBET သို့ DarkTokenDT0.0118 BetaCoinBET သို့ CETUS CoinCETI37